Author: Goshakar Morn
Qodobadaan waa kuwa ka mid ah Tixda: Fikradani waxay kaga timid dastuurka markii ugu horeysay Xeerkii Kumeel Gaarka ahaa ee la qoray sanadkii Waxaa laga keenay ” https: Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha.
Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda. Qodobka 99aad-Madaxweyne-Ku-Xigeenka Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha.
Qodobka aad-Habka Iscasilaadda Madaxweynaha. Waxaa dhacday hadda ka hor in nin Hindi ah oo Deganaasho ku leh Dubay iyo Nayroobi uu sameeyo Baasabooro Soomaali ah taasoo fadeexad ku noqotay Laanta socdaalka Soomaaliya. Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga.
Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Qoraalka gudaha oo kooban. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa madaxa Qaranka iyo xukuumadda, waana astaanta midnimada Qaranka. Badmareenka Soomaalida Ciidanka Xoogga. Dawladda Wali mayeelan Dastuur dadku ansixiyeen kaas oo ka turjumaya Soomaaliya oo dhan waloow uu jiro mid kumeel gaar ah oo lagu magacaabo Dastuurka federaalka ku-meel-gaara ah Dastuurka iyo Federaalaynta.
Madaxweyne Axmed Ducaale Gelle, Xaaf, ayaa taageeray go’aanka xulufadaha Sucuudiga, halka madaxweyne ku xigeenka Maxamed Xaashi Cabdi “Carabeey” iyo goddoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal Casir ay dasttuurka go’aanka dowladda federaalka iyaga oo cuskaday qodobka aad ee dowladda dhexe siinaya awoodda ay go’aan uga gaari lahayd siyaasadda arrimaha dibadda.
Hadaba, halkuu ku dhammaan doonaa khilaafka soo kala dhex galay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya? Cutubka 6aad Matalaadda Shacabka. Maxkamadda Sare oo ku taal Muqdisho Gudoomiyaheedana waxaa soo doordta Madaxweynaha.
Dowlad goboleedyo federalka ayaa laga dhisi karaa dhulka ku soomaliya jamhuuriyada gudaheeda markii ay daruufo jiraan. Muuqaalka Akhri Itusi xogta Itusi taariikhda. Xildhibaanadan ayaa sidoo kale ka dalbaday dawladda Isutaga Imaaraadka Carabta in ay ixtiraamto madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya.
Dastuurka Qabyada dastuudka wuxuu siinayaa dowlada federaalka in tilaabooyin maamul ay qaado markii dowlad goboleed ay dabacsan tahay ama ay u dhaqmeyso si lidi ku ah dastuurka. Cutubka 16aad – Qodobbada Guud.
Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga. Waxaase xaalka uga sii daraya in aysan jirin meel lagu kala boxo, sida maxkamad dastuuri ah oo aanan wali dhisnayn, taas oo go’aan ka gaari lahayd arrimaha ceynkan oo kale ah oo la’isku qabsado.
Imaaraadka oo rajo xumo ka muujiyay xal u helidda khilaafka Khaliijka. Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha. Cutubka 9aad Laanta Fulinta ee Federaalka. Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay Qodobka aad-Muddada Xaafiiska Madaxweynaha iyo Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano. Cutubka 12aad Heerarka kala Duwan ee Shaqaalaha dowladda ee Rayidka.
Nidaamka Federaaliga iyo Qaranimada Soomaaliya 7 Sebtembar Soomaaliya malahan Ciidan habaysan kaas oo awooda hanashada amaanka Dalka iyo Xuduudihiisa, waloow ay dhisanyihiin ciidan gaaraya ugu yaraan 50, hadana waa ciidamo beeleedyo la isu-keenay.
Qodobka aad-Dhaarta Madaxweynaha Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Fderaalka Maxkamaada Dastuuriga.
Eeg Shuruudaha adeegsiga ee faahfaahinta. Xisbiyada siyaasadda Xiriirka Dibadda Baasaboor.
Waxaa jiray shirar is daba joog ah oo ay yeelanayeen golaha wasiirada Galmudug oo la doonayo in lagu xaliyo khilaafka ka dhaxeeya hoggaanka maamulka sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka warfaafinta Galmudug Maxamuud Aadan Cusmaan Masagawaa. Waxaanu doonaynaa in xiriirka la hagaajiyo”, ayuu yiri xildhibaan Zakariye.
Qodobka aad-Dhaarta Wasiirada Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga. Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa. Dastuurka Qabyada ah wuxuu aad uga hadlayaa waxa ka dhaca Muqdisho maadaama ay tahay caasimada federaalka, ee nidaamka federaaliga ah.
Soomaliya markii uu garoonka Cadaado kasoo dagayay waxaa loosoo dhaweeyay si aanan horay loo arag, waxaana hareertiisa ka muuqday guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Galmudug oo ahaa ninkii shir guddoomiyay kullankii baarlamaanka ee xilka looga qaaday madaxweynihii hore Cabdikariim Xuseen Guuleed. Haddi kale waqtigaas waxaa loo tixgelinayaa in uusan aheyn muddo xileed marka la fiiriyo u jeedooyinka qodobka ee muddo xileedka Madaxweynaha. Soomaaliya Waxay leedahay Baasaboor Elektaroonik ah inkastoo kaydka macluumaadka ama Serverka kaydiya Macluumaadka uu yaalo Imaaraatka Carabta Wali Awood uma helin laanta Socdaalka in ay usoo wareejiso Soomaaliya.
Haddii musharraxa uu soo jeediyo xisbi, magacaabistiisu waa in ay taageeraan ugu yaraan hal laan oo ka mid laamaha xisbiga ee ku yaalla dawlad-goboleed kasta. Waxa uu ku baaqay in uu Kismaayo ku fidinayo gogol la’isugu keenayo madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada si loo turxaan bixiyo madmadoowga soo baxay. Haddii qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa la tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay. Marar badan oo hore maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in xiriirka ay u jartay dowladda dhexe.
Soomaaliya Waxay kamid tahay Dalalka ugu Faqrisan aduunka, Ma jiro Fayo-dhawr guud oo kafaala qaadaya caafimaadka asaasiga ah ee Muwaadinka Soomaaliyeed. Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa 1 Musharraxa Madaxweynenimada ama ku-Xigeenka Madaxweynaha waxaa soo jeedin karaa xisbiyada siyaasadeed ama wuxuu noqon karaa Musharrax madax-bannaan.